Hitombo ve ny tongotro avy amin'ny bisikileta - BikeHike
Mampihena ny tongotrao ve ny bisikileta?
Ahoana no hanakanana ny tongotro tsy hihalehibe rehefa mitaingina bisikileta?
Ampy ve ny bisikileta 30 minitra isan'andro?
Nahoana no mihabetsaka ny tongotro avy amin'ny bisikileta?
Ahoana no ahazoan'ny mpitaingina bisikileta mahia tongotra?
Manome alahelo be anao ve ny bisikileta?
Mahatonga anao mahia ve ny bisikileta?
Mampihena kibo ve ny bisikileta?
Be loatra ve ny bisikileta isan'andro?
Mandra-pahoviana no ilaina ny hazakazaka am-bisikileta?
Tsara ho an'ny fe ny bisikileta?
Afaka manolo ny andro tongotra ve ny bisikileta?
Mety amin'ny endrika ivelany ve ny bisikileta?
Nahoana no mahia be ny mpitaingina bisikileta?
Hanao feo ny tongotro ve ny bisikileta?
Tsara kokoa ve ny mihazakazaka na mitaingina bisikileta mba hanamafisana ny tongotra?
Ahoana no hanovan'ny bisikileta ny vatako?
Ohatrinona ny lanjanao afaka very bisikileta 30 minitra isan'andro?
Ny valiny fohy momba ny hoe hahatonga ny tongotrao ho lehibe ny bisikileta na tsia - tsia. Mazava ho azy fa manatsara ny hozatry ny tongotrao ny bisikileta, fa amin'ny maha-panatanjahantena aerobic azy, dia miasa ny fibra hozatrao, ka mahatonga azy ireo ho mahatohitra ny havizanana mandritra ny fiofanana, fa tsy mahatonga azy ireo hiakatra.
Ny mitaingina bisikileta dia manome fanazaran-tena tsy misy fiatraikany ary manampy amin'ny fandoroana tavy amin'ny vatana. Mampihena ny tongotrao ny bisikileta tsy tapaka. Ho an'ireo izay manana fironana hiakatra avy amin'ny fanatanjahan-tena, ny fampihenana ny fanoherana sy ny fitandremana ny teknikanao dia hanampy anao hahatratra ny fihenan-danja nefa tsy manampy ny hozatra.
Ahoana ny fomba am-bisikileta hampihena lanja fa tsy hamorona tongotra lehibe Tanjona ny handeha lavitra kokoa, fa tsy ny sarotra kokoa, mba hampitombo ny fandoroana kaloria anao sy hanorina fiaretana. Mampiasà fiofanana elanelam-potoana mba hampitomboana ny fandoroana kaloria. Misafidiana elanelana fisaka fa tsy havoana mandritra ny fanazaran-tenanao.
Ny fanazaran-tena amin'ny bisikileta mandritra ny 30 minitra farafahakeliny isan'andro dia hampitombo ny fiaretan'ny fonao sy ny hozatrao. Mety hahatsapa ny haavon'ny angovo ambony kokoa ianao mandritra ny andro, satria manampy amin'ny fampihenana ny fahatanjahanao ny fanatanjahan-tena.
Na izany aza, rehefa mihamatanjaka ny hozatry ny tongotrao, dia mihamitombo ny habeny. "Raha mandeha amin'ny fanoherana mahery vaika ianao mandritra ny fotoana maharitra, dia mety hahazo hozatra bebe kokoa ianao,'" hoy i Keoni Hudoba, mpamorona ny Cyc Method, ary mpampianatra bisikileta ao amin'ny NYC's Cyc Fitness.
Ny hafainganam-pandehan'ny bisikileta haingana dia atao amin'ny haavon'ny fanoherana ambany. Ny fanazaran-tena amin'ny bisikileta an-kalamanjana dia atao amin'ny fitaovana iva amin'ny lalana fisaka mba hahazoana ireo tongotra manify mpitaingina bisikileta. Ny maha-samihafa ny fanazaran-tena amin'ny havoana dia ny vatanao dia mifamatotra matetika amin'ny tongotra izay mitarika hozatra.
Ny bisikileta dia tsy hanome anao vody lehibe kokoa, fa mety hanome endrika anao kokoa noho ny tombony ho an'ny cardio sy hozatra. Ny bisikileta dia miasa ny tongotrao sy ny glutes, indrindra rehefa miakatra ianao, saingy tsy maharitra ela izany na manome fanoherana ampy hananganana hozatra lehibe.
Ny mitaingina bisikileta dia fanatanjahan-tena cardio tena tsara. Afaka manampy amin'ny fampivoarana ny fonao sy ny havokavokao izany, manatsara ny fikorianan'ny ranao, manangana tanjaky ny hozatra, ary mampihena ny haavon'ny adin-tsainao. Ankoatr'izay dia afaka manampy anao handoro tavy, handoro kaloria, ary hampihena lanja.
Eny, afaka manampy amin'ny fanesorana ny tavy kibo ny bisikileta, saingy mila fotoana izany. Ny fandinihana vao haingana dia nampiseho fa ny bisikileta tsy tapaka dia mety hampitombo ny fatiantoka amin'ny ankapobeny ary hampiroborobo ny lanjany ara-pahasalamana. Mba hampihenana ny haavon'ny kibo amin'ny ankapobeny, ny fanazaran-tena aerôbika antonony, toy ny bisikileta (na anatiny na ivelany), dia mahomby amin'ny fampihenana ny tavy kibo.
Tsara ny mitaingina bisikileta isan'andro raha atao amin'ny haavon'ny heriny tsara ary raha manana fotoana ampy hisitranana ny vatanao. Mila andro fanarenana ireo mpitaingina bisikileta mifaninana noho ny hamafin'ny fanazaran-tenany sy ny hazakazaka ataony, raha toa kosa ireo mpitaingina bisikileta tsy misy fialan-tsasatra.
Taorian'ny fiatoana lava dia hitako fa mila fito ka hatramin'ny folo andro vao manomboka mahatsapa ho ara-dalàna indray amin'ny bisikileta. Ny andro vitsivitsy voalohany dia ho sarotra, fa aorian'ny herinandro na mihoatra dia tokony hahatsiaro tena tsara ianao hanomboka hampitombo ny enta-mavesatry ny fiofanana, ary avy eo dia eo amin'ny lalana mankany amin'ny fahasitranana ianao.
Ny bisikileta dia afaka manampy ny tongotra, ny feny ary ny vodiny Miaraka amin'ny hazakazaka sy ny lomano, ny bisikileta dia iray amin'ireo fanazaran-tena aerobic tsara indrindra; hanamafy orina sy hampivelatra ny tonon-tongony sy ny hozatra ary afaka manampy anao hanary tavy eo amin`ny fe sy ny zanak`omby.
Aoka ho fantatra fa tsy afaka "hanolo" ny andro tongotra ianao. Eny, ny mitaingina bisikileta fanatanjahan-tena na manao kilasy fihodinana indray mandeha na indroa isan-kerinandro dia hanampy amin'ny fananganana hozatra amin'ny tongotra.
Ny bisikileta dia fomba tsara hifehezana na hampihenana ny lanja, satria mampiakatra ny taham-pahavitrihanao, manorina hozatra ary mandoro tavy amin'ny vatana. Raha miezaka mampihena lanja ianao, dia tsy maintsy ampiarahina amin'ny drafitry ny fihinanana sakafo mahasalama ny bisikileta. Ny fikarohana britanika dia mampiseho fa ny mitaingina bisikileta antsasak'adiny isan'andro dia handoro tavy efa ho dimy kilao mandritra ny herintaona.
6. Nahoana no mahia be ny sandrin'ny mpitaingina bisikileta? Amin'ny ampahany dia ireo bibikely mpihinana nofo ao anatin'ny kitapo misy hatsembohana, fa ny ankamaroany dia satria (sarotra izany) ny pedals dia eo ambanin'ny tongotsika ary ny sandrintsika dia tsy manao na inona na inona afa-tsy ny mandeha tsikelikely.
Amin'ny maha-panatanjahantena maharitra azy, ny bisikileta dia mety tsara ho an'ny fahasalamana ho an'ny fo, ary koa ny fanamafisana ny hozatra, ny fanatsarana ny vatana ary ny fanatsarana ny endriky ny vatana. Ary afaka manampy amin'ny fanatsarana ny feon'ny hozatry ny tongotrao, ny glutes ary ny fotony.
Ny bisikileta dia afaka manampy anao hanangana hozatra amin'ny antsasany ambany. Ny hazakazaka dia tsy hitarika ho amin'ny ampahany betsaka, fa afaka manampy anao hampivelatra hozatra matanjaka kokoa. Ny fanosehana pedal mandritra ny bisikileta dia fanofanana fanoherana izay manorina hozatry ny tongotra.
Fitantanana lanja Ny bisikileta mahazatra, indrindra amin'ny hery mahery vaika, dia manampy amin'ny fampidinana ny tavy amin'ny vatana, izay mampiroborobo ny fitantanana lanja ara-pahasalamana. Ankoatra izany, hampitombo ny metabolismanao ianao ary hanorina hozatra, izay ahafahanao mandoro kaloria bebe kokoa, na dia miala sasatra aza.
Mora kokoa ny mampita amin'ny lovia misy gilasy noho ny manao fanatanjahan-tena. Na izany aza, na dia tsy nanao fiovana tamin'ny drafitry ny sakafo mahazatra aza ianao, ny mitaingina bisikileta fanatanjahan-tena 30 minitra in-dimy isan-kerinandro dia hanampy anao hampihena iray na roa kilao isam-bolana. Raha mihinana sakafo ara-pahasalamana sy manao fanatanjahan-tena ianao, dia afaka manantena ny ho very bebe kokoa.
Valiny haingana: Afaka mampitombo ny tongotrao ve ny bisikileta
Fanontaniana: Mampitombo ny tongotrao ve ny bisikileta
Fanontaniana: Hampitombo ny tongotro ve ny bisikileta
Fanontaniana: Manampy ny hozatry ny Unterus ve ny bisikileta
Manampy amin'ny fananganana hozatra ve ny bisikileta
Manampy Tone tongotra ve ny bisikileta
Fanontaniana: Manampy amin'ny bisikileta ve ny fanaratra tongotra
Valiny haingana: Manampy ny vatana ambony ve ny bisikileta
Fanontaniana: Manalefaka ny tongotrao na lehibe kokoa ve ny bisikileta
Ahoana no anampian'ny bisikileta ny vatanao
Fanontaniana: Afaka manampy ny tavy ambany ve ny bisikileta?
Ahoana no ahafahan'ny bisikileta manampy ny vatanao
Aza mosarena ny fomba fanamboarana marbra mampiahiahy
Valiny haingana: Aza mosarena ny fomba fanamboarana sary sokitra marbra
Aza mosarena ny fomba fanamboarana sambo
Aza mosarena amin'ny fanamboarana horohorontany
Fanontaniana: Aza amboarina ny tafo Apetaho fotsiny ny tafo masoandro amin'ny taloha
Valiny haingana: Aza amboary ny Bokin'ny Tranomboky
Fanontaniana: Aza manamboatra granita amin'ny sisiny
Aza manongotra ireo raviny fanamboaran-tany
Aza mamporisika ny mpampiasa hafatra diso rehefa Compact Repair Access Database
Valiny haingana: Aza mandoa asa ho an'ny fanamboarana compressor Kenmore Elite